မိဘဘိုးဘွားအမွေ...ဆိုတာပြောသံကြားဖူးကြမှာပါ။ အမွေရတယ်၊ အမွေဆိုင်တယ်၊ အမွေလုတယ်..စသည်ဖြင့် လောကီလူ့ဘောင်မှာအမွေဆိုင်ရာစကားလုံးတွေအများကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ မိဘဘိုးဘွားတိုင်းလိုလိုနောင်လာနောက်သား သားသမီးမြေးတွေကို ကောင်းမွေဘဲပေးချင်ကြတယ်။ ဥစ္စာအမွေ၊ ပညာအမွေ၊ ဓနအမွေ...အမျိုးမျိုးပေါ့လေ။
ဒီလိုအမွေတွေထဲမှာ မပေးသင့်တဲ့အမွေကို၊ မသိလိုက်ဘဲပေးမိခဲ့ကြတဲ့၊ ပေးမိနေကြတဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကတော့ သွားပိုးစားရောဂါဖြစ်စေတဲ့ S. Mutans လို့ခေါ်တဲ့ရောဂါပိုးအပါအ၀င်ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေပါ။
မွေးခါစ၊ အမိဝမ်းကထွက်ခါစမှာ ကလေးတွေအားလုံးရဲ့ခံတွင်းဟာ ရောဂါပိုးမွှားကင်းစင်နေခဲ့ပါတယ်။ မိခင်နို့ကိုစို့ချိန်၊ နို့ဘူးစို့ချိန်၊ ကိုယ့်လက်ကိုပြန်စုပ်တတ်ချိန်တွေကစလို့၊ မိခင်ရဲ့အရေပြား၊ နို့ဘူးနဲ့ ကိုယ့်လက်မှာကပ်ညိလာတဲ့သာမန်အားဖြင့်ရောဂါမပေးတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေဟာ၊ ကလေးခံတွင်းထဲကိုစတင်ရောက်ရှိပြီး၊ ပါးစောင်၊ လျှာ၊ သွားမပေါက်သေးတဲ့သွားဖုံးသားတွေပေါ်မှာ ကပ်ညိနေထိုင်ကြပါတော့တယ်။ ဒီအချိန်ကစပြီး၊ နေ့စဉ်စားတဲ့အစာ၊ ထိတွေ့တဲ့အရာဝတ္ထုစတာတွေကနေ အမျိုးမျိုးသောပိုးမွှားတွေ တစစရောက်လာကြပြီး လူကိုအမှီပြုပြီး အသက်ရှင်နေထိုင်လိုက်ကြတာ ပိုးအမျိုးပေါင်း ၅၀၀ကျော်အထိရှိတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ ဒီပိုးတွေက လူနဲ့ပိုးမွှားရဲ့သဟဇာတမျှနေမှု balance ပျက်သွားတာနဲ့ ရောဂါတွေကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီထဲက အဆိုးဆုံးကတော့ Streptococcus Mutans (S. Mutans) လို့ခေါ်တဲ့ဘက်တီးရီးယားဖြစ်ပါတယ်။
တွယ်ကပ်တဲ့ပရိုတိန်းဓာတ်တွေထုတ်နိုင်တဲ့ ဒီပိုးကစပြီး သွားမျက်နှာပြင်၊ ပါးစောင်စတဲ့မျက်နှာပြင်တွေပေါ်အရင်တွယ်ကပ်ပြီး၊ တခြားပိုးတွေသူ့အပေါ်မှာပွားများပြီးနေနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးလို့ပါဘဲ။ သွားပိုးစားရောဂါဖြစ်စေတဲ့၊ စားကြွင်းစားကျန်တွေကနေ အက်စစ်ဓာတ်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်း ဒီပိုးက အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်သွားပိုးစားနိုင်တဲ့အလားအလာ Caries Risk များမများကို၊ S. Mutans အနည်းအများနဲ့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အချိုတွေစားပေမယ့် တချို့ကပိုးစားတယ်တချို့ကပိုးမစားဘူး၊ သွားတနေ့တခါဘဲတိုက်ပေမယ့်ပိုးမစားဘူး..စသည်ဖြင့် လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သွားပိုးစားနှုန်းချင်းကွာတာဟာ၊ ဒီပိုးပမာဏကအကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ခံတွင်းထဲမှာ အမြဲနေနေကြတဲ့ဒီ S. Mutans ပိုးတွေများနေရင်၊ သူများတွေထက်သွားပိုးစားနိုင်ခြေပိုများနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမွေကိုပြန်ဆက်ရရင်၊ မိဘဘိုးဘွားတွေရဲ့ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ဓလေ့ကိုပြောရပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် ရှေးလူကြီးလို့ ကျွန်တော်တို့သုံးနှုံးခေါ်ဝေါ်တဲ့ လူကြီးတွေတော်တော်များများက သွားမပေါက်သေးတဲ့ကလေးတွေကို အစာဝါးပြီးခွံ့လေ့ရှိကြပါတယ်။ ကလေးအတွက်သီးသန့်ထုတ်တဲ့အသင့်ဖျော်ကျွေးလို့ရတဲ့အစာတွေသုံးတာ ခေတ်မစားသေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနေရာတော်တော်များများမှာဒီဓလေ့ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။ လူကြီးတွေဝါးပြီးထုတ်လိုက်တဲ့အစာတွေမှာ ခံတွင်းထဲက၊ သွားမျက်နှာပြင်ပေါ်က၊ တံတွေးထဲက ရောဂါပိုးမွှားတွေဘယ်လောက်တောင်များလိမ့်မလဲဆိုတာ မှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ခံတွင်းထဲကပိုးမွှားတွေကို ကိုယ်သိပ်ချစ်တဲ့ သားသမီး၊ မြေးလေးကို အမွေပေးမိခြင်းပါဘဲ။ ဒါကို မပေးသင့်တဲ့အမွေလို့ကျွန်တော်က သုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာသွားပိုးစားရောဂါဖြစ်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယားကိုဘဲ အဓိကပြောထားပေမယ့် အသည်းရောင်အသားဝါဘီ-စီပိုးလို တံတွေးထဲမှာရှိနိုင်တဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ရောဂါတွေလည်းကူးနိုင်ပါသေးတယ်။
၀ါးပြီးခွံ့တာအပြင်၊ ကလေးနှုတ်ခမ်းကိုနမ်းရှုံ့တာ၊ ကလေးလက်ကိုကိုယ့်ခံတွင်းထဲထည့်စေပြီးကျီစယ်ကစားတာ၊ နို့ဘူးရဲ့နို့သီးခေါင်းကို နှုတ်ခမ်း-လျှာစတာတွေနဲ့ ပူမပူစမ်းကြည့်တာ၊ လူကြီးစားတဲ့ ဇွန်း-ခရင်း-တူ စတာတွေနဲ့ကလေးကိုခွံ့ကျွေးတာစတဲ့ အပြုအမူတွေကလည်း လူကြီးဆီကနေ ကလေးဆီကို ဘက်တီးရီးယားအမွေပေးတာတွေပါဘဲ။
ဒီပို့စ်ကိုဖတ်မိတဲ့စာဖတ်သူတွေကတဆင့် မြန်မာပြည်က ကိုယ်နဲ့နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေ-ဆွေမျိုးတွေကိုအသိဖြန့်ဝေပေးကြမယ်ဆိုရင်၊ နောင်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေအတွက် မပေးသင့်တဲ့အမွေမပေးမိစေဖို့ အသိပညာဒါနပြုလုပ်ခြင်းတမျိုးအနေနဲ့ ကုသိုလ်တွေရကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါကြောင်း..........
Ref: Caufield PW, Griffen AL. Dental caries. An infectious and
transmissible disease. Pediatr Clin North Am, 2000; 47; 1001-19.
Posted by Dr. Nyan at 9:47 AM
သွားမပေါက်တဲ့ ကလေးတွေကို ၀ါးဝါးပြီးကျွေးတတ်တာ၊ နို့ဘူးရဲ့နို့သီးခေါင်းကို နှုတ်ခမ်း-လျှာစတာတွေနဲ့ ပူမပူစမ်းကြည့်တာတွေကတော့ တွေ့မြင်နေရတာပဲ အခုလို မမြင်နိုင်တဲ့ Streptococcus Mutans လို့ခေါ်တဲ့ဘက်တီးရီးယားမျိုး မိမိတို့ ကလေးတွေထဲ ၀င်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကြီးမားတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တာကို အခုမှပဲ သိရတော့တယ်
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုပါ လက်လှမ်းမီသလောက် ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ကြပါစေ
ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ကျနော်တို့ရဲ့ ၁၀လသားလေးကို ဆိုးမွေမပေးသင့်အောင် ဆင်ခြင်ပြုမူပါတော့မယ်။ကျေးဇူးအထူးဆရာ။